Nintendo dia tsy mikasa ny hanitatra ny atin'ny Super Mario Run | Vaovao IPhone
Nintendo dia tsy mikasa ny hanitatra ny atin'ny Super Mario Run
Super Mario Run, angamba ny lalao irina indrindra amin'ny taona miaraka amin'ny Pokémon Go, dia hanodina herinandro iray ao amin'ny App Store. Misy isan'andro toy ny laharana voalohany amin'ny lisitry ny fisintomana maimaim-poana indrindra (Na dia tena zava-misy aza izany dia TSY lalao maimaim-poana satria hatramin'ny ambaratonga telo dia tsy maintsy mividy in-app mividy € 9,99 raha te hanohy hilalao), ny fahombiazany amin'ny fampidinana dia fahombiazana mitsikera ihany koa.
Miaraka amin'ny kintana roa ao amin'ny App Store, na aiza na aiza ny hevitra ratsy dia ratsy. Betsaka ny mpilalao mitsikera ny fahatsorany tafahoatra, fa tsy azo atao ny mifehy ny hafainganan'ny fihazakazahana na ny fihemorana ary indrindra ny vidiny sy ny fomba nisafidianan'izy ireo hamoahana azy. Saingy na eo aza izany rehetra izany, avy amin'ny Nintendo dia toa faly tokoa izy ireo milaza fa, farafaharatsiny mandritra izao fotoana izao, Tsy mikasa ny hanitatra ny Super Mario Run izy ireo miaraka amin'ny atiny vaovao.
1 Super Mario Run, fahombiazana voatsikera mafy
2 Ny ahiahin'ireo mpampiasa vola
Super Mario Run, fahombiazana voatsikera mafy
Alohan'ny sy aorian'ny fandefasana azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny Alakamisy 15 Desambra ao amin'ny App Store for iPhone sy iPad (ary ho an'ny iPod Touch, izay saika hadinonay foana ny milaza azy), i Nintendo sy i Apple dia samy nanangana ny milina fampielezan-kevitra mahery vaika nanetsika fanantenana izay efa avo dia avo tokoa.. Voalohany ny fanambarana voalohany (tamin'ny 7 septambra) miaraka amin'ny mistery ny "famotsorana amin'ny faran'ny taona"; avy eo ny oran'ny tsaho; ary rehefa antomotra ny fanombohana, fisehoan'i Miyamoto tamin'ny fahitalavitra ary mazava ho azy, App Store iray mitafy lamba mena izay toa tsy nisy afa-tsy ny Super Mario Run.
Araka ny efa nampoizina, ny sary Super Mario Run ao amin'ny App Store dia tsy nandiso fanantenana, mahatratra haingana ny toerana voalohany na eo an-tampon'ny fampidinana na eo an-tampon'ny vola. Nahomby ny fikafika. Lalao maimaim-poana izay tsy tena maimaim-poana, izay tsy isalasalana fa mandrisika ireo mpampiasa maro izay niafara tamin'ny tsy nividy azy, mba hisintona sy hanandrana azy, ka hanosika azy ho any an-tampon'ireo lisitra ireo.
Nintendo, via Miyamoto, nanondro izy fa ny iray amin'ireo tanjona lehibe izay ezahin'izy ireo tanterahina amin'ny Super Mario Run (lalao voalohany an'ny orinasa Japoney natao ho an'ny finday fotsiny), dia ny famerenana ny fahatsorana tany am-boalohany. Ary izany no nahatonga ny lalao iray izay tsy ilainao mihoatra ny tanana (rantsantanana, raha ny marina), ary ny fifandraisana maharitra amin'ny Internet (zavatra izay tena vitsy no tia).
Ny ahiahin'ireo mpampiasa vola
Fa herinandro aorian'ny famoahana ofisialy azy, Ny Super Mario Run dia toa tsy mifanaraka amin'ny andrasan'ny Nintendo Investors (na an'ny mpampiasa maro), na farafaharatsiny izany no voalaza ao amin'ny The Wall Street Journal.
Toa mpampiasa vola Nintendo maro miahiahy momba ny tombom-barotra ankapobeny amin'ny lalao, araka ny tatitra, ary koa amin'ny tsikera voalohany ataon'ny mpilalao.
Toy izany koa ny naoty navoakan'ny mpampiasa Super Mario Run ao amin'ny App Store
Ao amin'ny Super Mario Run dia manana fividianana tokana ianao ao anatin'ny rindrambaiko izay, amin'ny € 9,99, dia mamoha ny lalao iray manontolo. Na izany aza, Ny mpampiasa vola dia mihevitra fa ny lalao toa ny Pokémon Go dia manana tombony avo kokoa noho ny isan-karazany ny fividianana fanaparitahana ao anatin'ny fampiharana izay manome fandrisihana hanatsara ny traikefa lalao. Raha fintinina: fividianana kely maro izay mandrisika ny mpampiasa manana traikefa tsara kokoa dia miteraka fidiram-bola betsaka noho ny fividianana tokana misy sanda lehibe kokoa.
Nanantena ny sasany fa mikasa ny hampiditra atiny fanampiny i Nintendo mba hampidi-bola kokoa ny lalao, saingy araka ny tatitra, Nintendo tsy mikasa ny atiny fanampiny ho an'ny Super Mario Run amin'ny iOSSady tsy maimaimpoana no tsy karama, hoy ny mpitondra tenin'ny orinasa iray.
Mazava ho azy, ary io no hevitry ny tena, aorian'ny nanolorany traikefa feno momba ny lalao ho an'ny fandoavam-bola tokana, ny fampidirana atiny fanampiny karama (izay hanafoana izany fampanantenanao traikefa feno izany) dia azo heverina ho ambany noho ny famitahana.
Saingy ity, ho an'ny mpampiasa vola, dia mety handiso fanantenana ireo mpilalao sasantsasany manantena ny Nintendo handeha be amin'ny iOS ho sehatra filalaovana na dia izany aza tsy manakana ny orinasa tsy hamoaka lalao vaovao amin'ny ho avy.
Ny marina dia, na eo aza ny tsikera ataon'ny mpilalao maro, toa tsy ao anatin'ny ahiahin'izy ireo ny atiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Nintendo dia tsy mikasa ny hanitatra ny atin'ny Super Mario Run